Ngaba kufanelekile ukuba ungabhalisi kwi-HBO? Sichaza indlela yokwenza | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Ukusasaza, Tutorials
Kwiminyaka yakutshanje, kubonakala ngathi kuye kwaba yinto ethe kratya kunentshukumo yabasebenzisi ukuba bazikhuphe kwi-HBO lakuphela ixesha leMidlalo yeTrone, ngaphandle kokunika ikhathalogu esele isinike ithuba.
Ngokwezifundo ezahlukeneyo, inani lababhalisi be-HBO lincitshisiwe ngama-75% emva kokuba uluhlu lwayo lwenkanyezi luphelile, uthotho oluye lwaphela ngokupheleleyo, ngesiphelo esingakhange sithande wonke umntu (into exhaphakileyo kolu hlobo lweendaba uthotho). Ukuba ucinga ukuba ixesha lifikile phuma kwi-HBONanga amanyathelo ekufuneka uwalandele.
Nangona kunjalo, ngaphambi kokurhuma ngaphandle kokuzama, kuya kufuneka uthathele ingqalelo inani leefayile ze- izinto ezinokusenza sicingisise ngesigqibo.
1 Izizathu zokuqhubeka nokubhaliselwa kwe-HBO
2 Ayizizo zonke izinto ezilungileyo kwi-HBO
3 Zikhusele kwi-HBO
4 Ungarhuma njani kwi-HBO kwiVodafone
5 Qalisa kwakhona ukubhaliselwa kwe-HBO
Izizathu zokuqhubeka nokubhaliselwa kwe-HBO
Ngokwembali, i-HBO isemva konothotho olukhulu kumabonwakude, kuthotho lweminyaka edlulileyo. Eminye imizekelo yezesondo kwi Umcuphi oyinyani, ENew York, Ucingo, I-Sopranos, iimitha ezimbini ezantsi, WestWorld, ukunika igama elaziwa kakhulu.
Kodwa ikhathalogu ye-HBO ayisekelwanga kuphela kwilixa elidlulileyo. Okwangoku usinika uthotho olufana ne- IChernobyl, Ukubulala uEva okanye uGenleman Jack, iTalemaid kaTata, iFosse / iVerdon, ukuJongwa kweDoom, iminyaka neminyaka… Uninzi lwezi ngcelele zihlala ziphelela ekufumaneni amanqaku amaninzi e-Emmy Award, zifumana isiqwenga esikhulu sabatyunjiweyo.
Kodwa kananjalo Ubeka ikhathalogu ebanzi yeefilimu, nangona kunjalo ngeNetflix, ikhathalogu ekhoyo ayinamtsalane ngokukodwa. Ezinye zezihloko esinazo ngokubhalisela i-HBO zonke ziimuvi zikaHarry Potter, iNzalaellar, iKong. Isiqithi seSkull, iQela lokuzibulala, Ifayile yaseWarren: I-Enfield Affair, iMiboniso bhanyabhanya engathandekiyo ye-Me Gru, yonke i-saga yeRocky ...
Ayizizo zonke izinto ezilungileyo kwi-HBO
Ingxaki esiyifumana nge-HBO ngumgangatho wesicelo sezixhobo zefowuni kunye namanye amaqonga afumaneka kuwo (iApple TV, iChromecast, iSmart TV, iPS4, iWebhu ...) kwaye ngamanye amaxesha umgangatho wevidiyo ngaphandle kwesantya esisenzileyo.
Ngexesha lokugqibela leMidlalo yeTrone, abasebenzisi abahlawula ngokwabo inkokhelo yabo, bathathe isigqibo khuphela isiqephu sepirate kumgangatho we-HD ukonwabela uthotho endaweni yokuba ubandezeleke kumgangatho ombi osinikwa yile nkonzo yevidiyo ngamanye amaxesha. Ukongeza, isivumela kuphela ukuba sonwabele umxholo okwi-1080p, ngaphandle kokhetho lwe-4k kunye ne-HDR encinci.
Asiyi kuhlala sifumana iingxaki xa kuziwa ekuveliseni umxholo eqongeni. Zisoloko zisenzeka xa abasebenzisi abaninzi beqongeni behlangene ukufikelela kumxholo ofanayo, into ebisoloko isenzeka nge Game of Thrones, zombini ngexesha lokuqala kwayo ngaxeshanye kwihlabathi liphela nakwiiyure emva kwenkulumbuso.
Ukubhaliswa kwe-HBO, enexabiso elinye le-7,99 euro, kusinika i ukubanakho ukuyisebenzisa ngaxeshanye kwizixhobo ezi-2 kuphela, engasivumeli ukuba sabelane ngayo nabanye abahlobo okanye usapho. NgeNetflix, owona mda uphezulu wezixhobo ezisebenzisa inkonzo yi-4, nangona ixabiso lokubhalisela liphezulu.
Ukuba ngaphandle kwekhathalogu esibonelelwa yi-HBO kunye nomgangatho wayo uthotho, bayaqhubeka nokucinga ukuba lixesha lokuba rhoxisa umrhumo wakho nge-HBOApha ngezantsi sikubonisa onke amanyathelo ekufuneka uwalandele ukuze ukwazi ukuyenza ngokusisigxina.
Ukurhoxa kwi-HBO, kufuneka siyenze ngebrawuza, ukusukela kwisicelo ngokwaso asinakho ukhetho lokwenza oko. Okokuqala, kufuneka ndwendwela iwebhusayithi yeHBO.
Nje ukuba singenise igama lomsebenzisi (i-imeyile) kunye negama lokugqitha, sikhetha uhlobo lomxholo esifuna ukuwujonga: uthotho kunye neemovie okanye abantwana (ukuba sikhe sasebenzisa olu khetho ngaphambili).
Emva koko, siya kwikona ephezulu ngasekunene kwaye ucofe iakhawunti yam, apho sinokongeza khona ulawulo lwabazali, susa izixhobo ezinxulumene neakhawunti yethu, jonga imbali yentlawulo, utshintshe iphasiwedi kunye lawula umrhumo wethu.
Ngokucofa kwi Ubhaliso, ikholamu esekunene iya kubonisa umhla apho kuyakwenziwa khona intlawulo entsha kwikhadi letyala esilisebenzisela ukuhlawulela inkonzo. Phezulu, sifumana ukhetho Ungazikhupheli.
Njengoko sele kulisiko ukuba sifuna ukurhoxa kuyo nayiphi na inkonzo, ihlawulwe okanye hayi, i-HBO icebisa ukuba sijonge kwikhathalogu yezinto ezisinika zona ngoku kunye nezinto ezizayo. Ukuba siyacaca ukuba asifuni ukuqhubeka nokuhlawula i-HBO, cofa ku Rhoxisa umrhumo.
Ungarhuma njani kwi-HBO kwiVodafone
Ukuba sithathela ingqalelo ukuba yinkonzo leyo IVodafone ibandakanya simahla Phakathi kwabo bonke abathengi abanesivumelwano senkonzo kamabonwakude nalo mqhubi, akukho mfuneko yokuba sikhuphe kwiqonga, kuba ngokuyeka ukuyibona, kuninzi.
Nangona kunjalo, ukuba kunjalo, Sibambe i-mania enganyamezelekiyo ye-HBO kwaye sifuna ukurhoxa, asinakwenza le nkqubo ngokusebenzisa iwebhusayithi ye-HBO, kodwa kufuneka siyenze ngokusebenzisa iVodafone eyenza ukuba ifumaneke kuthi okanye kwiwebhusayithi yayo, kwicandelo labathengi.
Qalisa kwakhona ukubhaliselwa kwe-HBO
Ngelo xesha, siya kubuyela kwicandelo leAkhawunti yam, apho usuku lokugqibela apho siya kuba nokufikelela kubhaliso lwethu lwe-HBO ngoku luya kuboniswa, kunye nomyalezo Ubhaliso lwakho lurhoxisiwe. Ukuba ngaphambi komhla omiselweyo Siqwalasele isigqibo sokungabhalisi kwi-HBO, kufuneka siye kwiAkhawunti yam> Ubhaliso kwaye ucofe kuVuselele umrhumo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungarhuma njani kwi-HBO